Sida loo habeeyo Xiriirada aad ugu jeceshahay macruufka 10 | Waxaan ka socdaa mac
Iyadoo la adeegsanayo IOS 10, nidaam cusub oo widget ah ayaa la soo saaray kaas oo noo ogolaanaya inaan abaabulno xiriirada aan jecel nahay si aad u cad, oo xitaa aan uga helno si ka dhakhso badan sidii hore.
Heerkan cusub ee habeynta ayaa aad uga sii dheer shaqooyinka wicitaanka. Iyadoo macruufka 10 Waxaan u abuuri karnaa astaamo kala duwan oo isla xiriir ah iyadoo la raacayo habka aan caadiyan u wada xiriirno mid kasta oo ka mid ah. Marka, waxaan soo saari karnaa astaamo si aan u sameysano FaceTime, dir fariin ama emayl ugu dirno qofka aan dooneyno.
Beddelaadda ama calaamadeynta xiriiriyaha sida loo jecel yahay hadda waxay ka dhigeysaa muuqaalka waxtar badan iyo shakhsi ahaanba, xitaa in ka badan tallaabooyinka degdegga ah ee muuqaalka 3D Touch ee noocyadii hore ee iOS. Dhanka kale, waa in aynaan indhaha ka qarsan doorbidida isgaarsiinta aasaasiga ah ee aan ku keydinay kaarka mid kasta oo ka mid ah xiriiradayada ku saabsan iPhone, waxay noqon doontaa mid muhiim ah marka la qaabeynayo xiriiradayada aan jecel nahay.. Sidaa darteed, ugu horreyntii, hubi inaad ku dartay dhammaan cinwaanada iyo lambarrada taleefan ee dadka aad la xiriirto, ugu yaraan kuwa aad u isticmaali doontid sida kuwa ugu cadcad.
1 Ku habaynta xiriirada aad ugu jeceshahay macruufka 10
2 Dejinta Qalabka Widget
Ku habaynta xiriirada aad ugu jeceshahay macruufka 10
Markaad horay u soo dejiso oo aad rakibto macruufka 10 On your iPhone, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda si aad u shakhsiyeeyo xiriirada aad ugu jeceshahay barnaamijka Telefoonka ee qalabkaaga.
Fur barnaamijka Telefoonkaaga iPhone-ka.
Xullo tabka "Favorites" ee ku yaal cirifka bidix ee hoose, laakiin ha dooran mid ka mid ah xiriirada ka muuqda liiska.
Guji batoonka "+" oo aad ka heli doontid geeska bidix ee kore ee shaashadda.
Hada raadso xiriiriyaha aad rabto inaad kudarto oo xulo.
Xulo habka aad rabto inaad ula xiriirto si toos ah: fariin qoraal ah, wicitaan, wicitaan fiidiyoow ama emayl.
Si aad u doorato lambar ama emayl aan ahayn kii lagu muujiyay markii hore, riix fallaarta yar ee farta ku fiiqaysa ee aad arki doontid dhinaca Fariinta, Wicitaanka, Video, ama Boostada oo dooro lambar ama emayl kuwa aad horey u haysatay ku keydisay iPhone-kaaga xiriirkan gaarka ah.
Ku noqo tabka Waxyaabaha aad jeceshahay iyo dariiqa cusub ee loo marayo xiriiriyahan ayaa ka soo muuqan doona qaybta hoose ee liiska ugu cadcad.
Hadda dhagsii "Wax ka beddel" geeska kore ee midig ee shaashadda si aad u tirtirto ama u beddesho mudnaanta xiriirada.
Markaad dhamayso abaabulka xiriidhadaada cusub ee aad jeceshahay, hubi in afarta xiriir ee ugu horreeya liistada ay yihiin kuwa kuugu cadcad ka dibna ku dar aaladda (inkasta oo ay jiri karaan ilaa siddeed), sida aan hoos ku arki doonno. Si tan loo sameeyo, liiska, riix Edit, ku qabo fartaada calaamadda saddexda xariiq leh ee u muuqata xiriir kasta ee soo socda, oo jiido kor ama hoos ilaa ay ka gaarto booska la doonayo. Markaad dhamayso, riix OK.
Dejinta Qalabka Widget
Liiskaan ugu cadcad ee cusub ayaa ah mid aad waxtar u leh maxaa yeelay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah ugu booddo si aad ula xiriirto qaab gaar ah qof gaar ahama. Isla mar ahaantaana, waxaad si dhow ugu dhowdahay xiriirada aad inta badan la xiriirto. Laakiin hadda sida ugu fiican, u habeeyso widget-ka oo ku siin doona dariiq dhab ah wixii aan hadda u habaynay. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda.
Fur shaashadda widget-ka iPhone-kaaga adoo maraya midigta shaashadda koowaad.
Hoos ugu dhaji widget-yada oo ku dhufo "Edit".
Raadi "Waxyaabaha aad jeceshahay" oo taabo badhanka cagaaran + si aad ugu darto wijiyadahaaga.
Adeegso saddexda bar ee aad ku aragto agtooda widget-ka si aad ugu dhaqaaqdid meesha aad rabto.
Dhagsii "Done" si aad u kaydiso isbeddeladaada. Waa inaad hadda aragtaa waxyaabaha aad ugu jeceshahay widget. Afarta hore waa afarta ugu horeysa ee aad ku qortay liistada aad ugu jeceshahay sidan.
Dhagsii "Show more" si aad u balaadhiso widget-ka wadar ahaan sideed xiriir.
Laga soo bilaabo widget xiriirada jecel waxaad heli kartaa ilaa sideed xiriir. Waxaad dib ugu laaban kartaa barnaamijka taleefanka si aad ugu darto oo aad dib u habayn ugu samayso xiriiradaada ugu muhiimsan ama aad u tafatirto xiriir. Isbedelada ayaa ka muuqan doona qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo habeeyo Xiriirada aad ugu jeceshahay macruufka 10
Haddii aad u baahan tahay xusuus dheeraad ah MacBook-kaaga, halkan waxaa ku yaal fursado dhowr ah oo qiimo jaban